Tourism Iceland: Gini banyere ileta ọdọ mmiri na Iceland?
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ kacha ọhụrụ na Iceland » Tourism Iceland: Gini banyere ileta ọdọ mmiri na Iceland?
Na-agbasa News Travel • Akụkọ kacha ọhụrụ na Iceland • Egwuregwu • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a
Igwu mmiri na Iceland abụghị ihe ọtụtụ ndị ọbịa na-eche banyere ileta Obodo ugwu Europe Island. Oge oyi, etiti abalị, ugwu ice mara mma bụ ihe na-abata n'uche.
Agbanyeghị, dị ka Iceland Monitor si kwuo, otu n'ime ihe ndị kachasị mkpa iji mee njem njem Icelandic bụ ịsa ahụ na ọdọ mmiri ndị dị na mpaghara. Obodo ọ bụla nwere ebe ịsa ahụ ya na-ekpo ọkụ, ma ọ bụrụ na nnukwu nnukwu ụlọ egwuregwu ma ọ bụ n'akụkụ obere ụlọ.
Ebe igwu mmiri Húsafell na-anọchi anya otu n'ime ihe ntụrụndụ ndị kachasị ewu ewu na paradaịs nkịtị nke mpaghara ahụ. O buru ụzọ mepee ụzọ ya na 1965 mana emegharịrị ya kemgbe ma ugbu a na-etu mmiri ọdọ mmiri abụọ, ọdọ mmiri ọkụ abụọ na obere mmiri.
Ọdọ mmiri Húsafell bụ nke kachasị ọnụ na ndị dị na ndepụta a.
Ihe nzuzo zoro ezo na ahịhịa nke ọdọ mmiri, Lýsuhólslaug dị na peninsula nke Snæfellsnes dị ka mba ndị ọzọ. O nwere ike ọ gaghị adị ka ọ na-akụda ugwu dị na Staðarsveit mana mmiri ịnweta ya na-abịa site na ụwa ma kwenyere na ọ dị mma, na-eme ka ahụ dị jụụ ma na-agwọ ọrịa. Enweghị mmiri ọgwụ, dị ka chlorine, na-agwakọta na mmiri.
Mgbe na Drangsnes, n'ebe ugwu Westfjords, nkwụsị na ọdọ mmiri ọkụ na-abanye n'ụsọ osimiri ya kwesịrị. Adbanye na tubs ahụ bụ n'efu mana ndị njem nwekwara ike chọọ ileta ya ọdọ mmiri ọhụrụ, emi odude ke sinik.
Ebube dị mma site na ebe igwu mmiri na Hofsós n'elu Skagafjörður na agwaetiti Drangey bụ ihe doro anya maka ndị njem chọrọ izu ike ọkpụkpụ ha ike gwụrụ. E mepere ọdọ mmiri ahụ na Machị 2010 ma nye ụmụ nwanyị abụọ azụmaahịa, Lilja Pálmadóttir na Steinunn Jónsdóttir nyere mpaghara ahụ.
Jónasarlaug na Þelamörk akpọrọ aha onye na-ede uri bụ Jónas Hallgrímsson. Ewubere ya n’agbata 1943-1945 ma buru ebe izu ike ama ama diri ezinulo ndi n’aga North. Emere mmezigharị sara mbara na 2008 bụ ma mmiri ọkụ ma tinye mmiri mmiri.
Selárdalslaug na Vopnafjörður dị ntakịrị si na egwu egwu mana nke ahụ na-eme ka ọ bụrụ ihe na-atọ ụtọ. Ọ dị n’akụkụ osimiri Selá nke na-agafe n’osimiri a na-emighị emi. A maara ọdọ mmiri ahụ maka ebe mara mma, mmiri ozuzo ma ọ bụ nchapụta. Na 33 Celsius, isi ọdọ mmiri ahụ dị ọkụ karịa nkezi Icelandic ọdọ mmiri mana ndị ọbịa nwekwara ike ịghasa na ọdọ mmiri kiddie na-emighị emi ma ọ bụ zuru ike na mmiri ọkụ.
N'èzí ebe site Ebe igwu mmiri nke Westman Island dị mma, ma na-atọ ụtọ. Childrenmụaka na ndị toro eto na-enwe ọ enjoyụ na mgbidi ịrị ugwu, nkata basketball na ọdọ mmiri abụọ ọdọ mmiri ahụ ga-enye.
Otu n’ime slide ndị ahụ na-akwụsị na trampoline nke na-agbapụ ndị na-egwu mmiri n’elu ikuku tupu ha erute na nsọtụ miri emi nke nnukwu ọdọ mmiri.